Semalt को एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्ड: सर्वश्रेष्ठ SEO टेक्निकल अडिट र विश्लेषण उपकरण
यदि यो एक स्वचालित उपकरणले तपाइँको वेबसाइट ट्राफिक बढाउन र तपाइँको समग्र डिजिटल व्यवसाय सुधार गर्न ठीक के गर्ने भनेर बताउँदछ भने यो राम्रो हुने छैन?
र हुनसक्छ स्वचालित रूपमा केही सिफारिसहरू लागू गर्दछ?
यी प्रश्नहरूको दिमागमा यस लेखको माध्यमबाट हामी तपाईंलाई "एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्ड" लाई परिचित गराउँदछौं: राम्रो एसईओ अडिट र विश्लेषण उपकरण। तर, हामी तपाईंसँग एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्ड अपनाउनेका सबै फाइदाहरू साझा गर्न सक्नु अघि, हामी पहिले बुझाउनेछौं SEO अडिट के हो? यो किन खोज इन्जिन अनुकूलनको लागि यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
यसका साथै हामी तपाईंलाई यो याद दिलाउन चाहन्छौं कि एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्ड एक सबै इन-वन उपकरण हो जसको अन्तिम लक्ष्य भनेको तपाईंलाई तपाईंको व्यवसाय आय बढाउन र तपाईंको ग्राहकहरूलाई राम्रो सेवाहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्नु हो। केकमा आईसिंग भनेको त्यो हो SEO कार्मिक ड्यासबोर्ड तपाइँलाई नि: शुल्क र प्रभावकारी SEO विश्लेषण उपकरणहरूको पहुँच दिन्छ।
अब, आउनुहोस् पहिले SEO SEO अडिट के हो बुझाउनुहोस्।
SEO अडिट के हो?
प्रतिस्पर्धी साइटहरूको तुलनामा खोज इञ्जिनमा यसको स्थान मूल्याate्कन गर्न तपाईंको वेबसाइटमा प्रदर्शन गर्नको लागि एसईओ अडिट आवश्यक परीक्षण हो। यसले पनि प्राविधिक अप्टिमाइजेसन र बिक्री र सुधार गर्नका लागि लिने कदम र कार्यहरू लिन्छ। संक्षिप्तमा, एसईओ अडिटको बखत, तपाईंको स्टोर वा वेबसाइटसँग सम्बन्धित सबै आन्तरिक र बाह्य कारकहरू स-साना विवरणहरूलाई ध्यानमा राखेर जाँच गरिन्छ।
अन्तिममा, यसले परिणामहरूको खोजी र एसईओ विशेषज्ञलाई उपयोगी जानकारीको एक सूचीको परिणाम दिन्छ। पछिल्लाले उपकरणको प्रयोग गर्दछ र आफ्नै अनुभव प्रयोग गर्दछ साइटको टेक्निकल प्रदर्शन र पूर्वाधारको मूल्यांकन गर्न। यसका अतिरिक्त, यस प्रक्रियामा, ब्याकलिks्कहरू र साइटको सामग्री पनि ध्यानमा राखिन्छ।
सामान्यतया, उपायहरूको सूची सूचीमा राखिन्छ परिणामलाई ध्यानमा राखेर SEO अडिट द्वारा प्रदान गरिएको। यस्तो क्याटलगले वेबसाइटको सबै सम्भावित दोषहरू र फाइदाहरू समावेश गर्दछ। यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा: एसईओ अडिट बिना तपाईंको वेबसाइटको भविष्यका लागि रणनीति बनाउन असम्भव छ। अडिट यसैले आधार हो जुन तपाईले आफ्नो वेबसाइटको भविष्य निर्माण गर्नुहुन्छ। र त्यहि हो जहाँ तपाईंलाई आवश्यक छ SEO कार्मिक ड्यासबोर्ड एक '' पूर्ण वेब एनालिटिक्स र SEO अडिट '' प्लेटफर्मको रूपमा।
SEO लेखा परीक्षणको उद्देश्य के हो?
फोकस एक वेबसाइट को खोज ईन्जिन मित्रता को मूल्यांकन मा छ। अन्तमा, नतिजाको सूचीबाट नतिजा निकालिन्छ।
अक्सर, यो वेबसाइट मालिकहरू वा तपाईंको एजेन्सीका ग्राहकहरू; सबै समान लक्ष्यहरूका लागि खोजिरहेका छन्:
वेबसाइट मूल्या through्कनको माध्यमबाट हालको एसईओ प्रवृत्ति, ट्राफिक सुधार र अन्य धेरै कारकहरू ट्र्याक गर्नुहोस्।
एक तेस्रो पक्ष द्वारा हालको SEO एजेंसीको सफलताको प्रमाणिकरण।
जैविक खोजी परिणामहरूमा दृश्यता वृद्धि।
तर SEO अडिटहरू पनि एजेन्सीहरूका लागि अवसर हुन्:
सेवा पोर्टफोलियो विस्तार गर्न।
प्राविधिक र सामग्री-सम्बन्धित उपायहरूको ग्राहकहरुलाई मनाउन।
सम्भावित ग्राहकहरूलाई उनीहरूको वेबसाइटको स्थिति बारे सूचित गर्न।
एक एसईओ अडिट को साथ, यो सिफारिसहरू आफैंले कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ: एसईओ एजेन्सी वा ग्राहक द्वारा। यो एसईओ अडिटको सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो।
त्यसकारण, एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्डको अन्तिम लाभ यो हो कि यसले तपाईंलाई निम्नका लागि अनुमति दिन्छ:
ग्राहक वफादारी सुधार गरी आफ्नो बिक्री वृद्धि;
सजिलै नयाँ ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्नुहोस्।
यी सुविधाहरू बाहेक, एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्डले तपाईंलाई एसईओ सेवाहरूको तपाईंको बिक्रीमा सुधार गर्न पनि अनुमति दिन्छ एक पटक तपाईं सदस्य बन्ने निर्णय गर्नुभयो। Semalt पार्टनर कार्यक्रम।
यो स्पष्ट छ कि अब तपाईलाई थाहा छ SEO अडिट के हो साथ साथै यसको उद्देश्य के हो। अब यो समयको लागि हामी तपाईंलाई यो देखाउँदछौं कि यसले के बृहत्तर रूपमा खातामा लिन्छ।
र यदि तपाईं एसईओ अडिट र विश्लेषण सेवाहरूबाट बढी पैसा कमाउने सपना देख्नुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई यसमा सामेल हुन आमन्त्रित गर्दछौं Semalt पार्टनर कार्यक्रम। यस तरिकाले, तपाईं एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्ड प्लेटफर्मले प्रस्ताव गर्ने सबै सुविधाहरूबाट लाभ उठाउनुहुनेछ।
यहाँ चरणहरू छन् जुन राम्रो SEO लेखा परीक्षणमा लिन्छ:
चरण १ - एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्ड प्रयोग गर्नुहोस्
सबैभन्दा पहिले, यो पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक कहाँबाट आउँदछ र उनीहरू कसरी तपाईंको वेबसाइटको विभिन्न पृष्ठहरू मार्फत जान्छन्। यसको उदाहरण यो हो जब गुगलबाट तपाईंको वेबसाइटको अवतरण पृष्ठमा आएका प्राय: पर्यटकहरू तपाईंको वेबसाईटमा seconds० सेकेन्ड भन्दा धेरै रोकिदैनन्।
यो डाटा पुनःप्राप्त गर्न तपाईलाई एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्ड चाहिन्छ। तपाइँ आफ्नो वेबसाइटको टेक्निकल विवरण जान्नको लागि यस प्लेटफर्मको निःशुल्क उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस उपकरणले पृष्ठमा टुक्रिएको लिंक र क्रल त्रुटिहरू जस्तो विभिन्न पक्षहरूको एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ।
चरण २ - Robots.txt र HTML र XML साइटम्यापहरू
तपाईंको रोबोट.टी.टी.एस्. फाइल बनाउनुहोस् वा जाँच गर्नुहोस्। Robot.txt मा तपाईले संकेत गर्नुभयो कि कुन पृष्ठहरू खोज इञ्जिनले क्रल गर्नुपर्दछ। यस robot.txt मा तपाईं आफ्नो वेबसाइटको साइटम्याप उल्लेख गर्नुहुन्छ। साइटम्याप खोज इन्जिनलाई वेबसाइटमा भएका परिवर्तनहरूको बारेमा द्रुत जानकारी दिन प्रयोग गरिन्छ। नतिजाको रूपमा, साइटहरूमा परिवर्तनहरू साइटम्याप नभएको वेबसाइटको तुलनामा छिटो अनुक्रमणिका हुन्छन्।
चरण - - टुटेका लिंकहरू ठीक गर्नुहोस्
टुटेका लिंकहरू पृष्ठहरू हुन् जुन फेला परेनन् वा त्रुटि रहेको छ। तपाईं तिनीहरूलाई एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्डमा समावेश उपकरणहरू प्रयोग गरी नक्सा बनाउन सक्नुहुनेछ। नियमित रूपमा त्रुटिको साथ पृष्ठमा भ्रमण गर्नेहरूले तपाईंको रूपान्तरण र SEO लाई हानी गर्दछ। एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्डले तपाईंलाई तपाईंको बिक्री बढाउनको लागि स्थायी रूपमा यो सुधार गर्न अनुमति दिनेछ।
चरण - तपाईंको वेबसाइटको गति जाँच गर्नुहोस्
तपाइँको वेबसाइटमा तपाइँको आगन्तुकलाई एक राम्रो अनुभव दिनको लागि, तपाइँको वेबसाइटले द्रुत रूपमा कार्य गर्न आवश्यक छ। तपाइँ यसलाई Semalt उपकरणको साथ दुबै मोबाइल र डेस्कटप संस्करणको लागि तपाइँको वेबसाइटको लागि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण - - मोबाइल र उपयोगकर्ता मित्रता
आज, प्रायः वेबसाइटहरू मोबाइल उपकरणको माध्यमबाट हेर्छन्। त्यसकारण गुगलले प्रत्येक वेबसाइटको मोबाइल मित्रत्वलाई एक कारकको रूपमा समावेश गरेको छ जुन तपाईंको वेबसाइटले स्तर निर्धारण गर्न सक्छ। यसले तपाईलाई जाँच गर्नका लागि आवश्यक बनाउँदछ। तपाईंको वेबसाइटको प्रयोगकर्ता मित्रताको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइटसँग स्पष्ट संरचना छ र आगन्तुकहरूको मनसायमा प्रतिक्रिया गर्दछ।
चरण - - कीवर्ड विश्लेषण र मेटा ट्यागहरू
प्रयोगकर्ताको आवश्यकतालाई जवाफ दिन, यी म्याप आउट हुनु महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँको वेबसाइटमा पुग्न तपाइँको सम्भावित ग्राहकले कुन कुञ्जी शव्दहरू र प्रश्नहरू प्रयोग गर्दछ पत्ता लगाउनुहोस्। कुञ्जी शब्द अनुसन्धानको साथ, नक्सा बनाउनुहोस् कति पटक यी सर्तहरू खोजिन्छन् र तपाईंको वेबसाइटको डिजाइन तपाईंको सम्भावित ग्राहकको खोजी आवश्यकता अनुसार गर्दछ।
मेटा वर्णनले तपाईंको CTR बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, त्यसैले तिनीहरूलाई जाँच्न र आवश्यक पर्ने ठाउँमा अनुकूलन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। उही समान शीर्षक ट्याग को लागी जान्छ। यसले तपाइँको वेबसाइट को रैंकिंग मा एक भूमिका खेल्छ।
चरण - - तपाईंको अफ-पृष्ठ अप्टिमाइजेसनको मूल्यांकन गर्नुहोस् (लिंक निर्माण गतिविधिहरू)
तपाईंको डोमेन प्राधिकरण, पृष्ठ प्राधिकरण हेर्नुहोस् र तपाईंको शीर्ष keywords कुञ्जी शव्दहरूको लागि लिंक निर्माण विकल्पहरू हेर्नुहोस् जुन तपाईं अझ राम्रो श्रेणीकरण गर्न चाहानुहुन्छ।
यो लेख पढिसकेपछि, तपाइँ SEO को बारेमा बढि सोच्नुहुन्छ? वा के तपाइँ SEO द्वारा अर्को चरण अगाडि बढ्न चाहानुहुन्छ? SEO को लागी तपाइँको वेबसाइट अनुकूलन गर्दै ? यस विषयमा बढि जानकारीका लागि हामी तपाईंलाई आमन्त्रित गर्दछौं हाम्रो ब्लगको भ्रमण गर्नुहोस्।
एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्डबाट कसले लाभ लिन सक्दछ?
चाहे तपाईं एसईओ एजेन्सी वा फ्रिल्यान्सर हुनुहुन्छ, प्लेटफर्मले तपाईंलाई ग्राहकहरू आकर्षित गर्न आवश्यक सबै कुरा दिन्छ प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राख्दा।
के तपाईंलाई उच्च-गुणवत्ताको काम पूरा गर्न वास्तवमै ठूलो बजेट चाहिन्छ? No! र SEO कार्मिक ड्यासबोर्ड प्लेटफर्म यसको प्रमाण हो। आजदेखि, अनुभव Semalt का नि: शुल्क उपकरणहरु, जो तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु का साइटहरु मा अद्वितीय र व्यापक रिपोर्ट प्रदान गर्दछ।
खैर, यदि तपाइँ Semalt सेवा पुनर्विक्रेता बन्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँलाई धेरै स्वागत छ। सामेल हुनुहोस् Semalt साझेदारी कार्यक्रम अहिले नै।
एसईओ अडिटको महत्त्व राम्रोसँग स्थापित छ। जहाँसम्म, यदि तपाईंसँग तदर्थ र लगातार आधारमा सही जानकारी स collect्कलन गर्न सही उपकरणहरू छैनन् भने, तपाईं कहिले पनि केहि पनि प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
त्यसोभए, तपाईंलाई व्यर्थमा नहेर्नुहोस्, Semalt ले तपाईंलाई एक अनौंठो समाधान प्रस्ताव गर्दछ जसले सबै प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्दछ: यो SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड। जो तपाईं हुनुहुन्छ, यो तपाईंको हातमा ह्या to्ग गर्न सजिलो छ र यसको प्रयोगले तपाईंलाई छिटो तपाईंको प्रदर्शन बढाउन दिनेछ, र सबै छोटो समयमा।
के तपाइँ यस उपकरणमा थप जानकारी चाहानुहुन्छ? नहिचकिचाउनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्न। हामी तपाईंको सबै प्रश्न र सरोकारहरूको जवाफ दिन २ 24/7 उपलब्ध छौं।
हामी पनि टिप्पणीमा तपाईंको विचार सुन्न खुसी हुनेछौं।